Ka-qaybgalayaasha WIC waxay heli doonaan foojarro bille ah oo loo isticmaali karo in ka badan dukaamada 900 New Jersey si ay u iibsadaan caanaha, farmaajada, ukunta, firileyda, rootiga oo dhan, iyo cuntooyinka kale ee caafimaadka leh ee ka muuqda daabacaadda 2020 ee Liiska Raashinka la ogolaaday
New Jersey Ka-qaybgalayaasha WIC waxay isticmaali karaan Voucher Value Voucher (mararka qaarkood loo soo gaabiyo "CVV") ama loo yaqaan "foojarrada" ganacsatada tafaariiqda ah) si ay u iibsadaan miraha iyo khudradda cusub, qasacadaysan ama barafaysan ee suuqyada iyo suuqyada beeraha, sanadka oo dhan.
Hooyooyinku waxay heli karaan $ 11 bishiiba oo ka mid ah Foojarrada Qiimayaasha Lacagta. Carruurta da'doodu tahay 2-4 waxay heli kartaa $ 9 bishiiba oo ku jira Foojaradda Qiimaha Lacagta.
CVV - Ingiriisi
CVV - Isbanish
Laga bilaabo Juun ilaa Nofembar, kaqaybgalayaasha WIC waxay isticmaali karaan jeegagga Suuqa Beeraha si ay ugu iibsadaan miraha iyo khudradda cusub ee soo koray ee suuqyada beeralayda u qalma. Baaritaanada Suuqa Beeraha ee WIC ayaan loo isticmaali karin dukaamada ama dukaamada kale.
Hooyooyinka iyo caruurta da'doodu tahay 2-4 waxay heli kartaa $ 25 bishiiba oo ku saabsan Jeegaga Suuqa Beeraha.